SOMALILAND: Doorashadii ay codeeyeen dadka dhintay, Qeylo dhaanta Xisbiga Wadani!!! – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
Xisbiga Wadajir “Waxaan garab taaganahay dowladda Somalia ilaalinta Wadajirka, Midnimadda Xuduudaha Dhulka Iyo Madaxbanaanida Qaranka” 6 hours ago
Home 2017 November W.Gudaha, Wararka Maanta SOMALILAND: Doorashadii ay codeeyeen dadka dhintay, Qeylo dhaanta Xisbiga Wadani!!!
November 20, 2017 |by Wariye| 0
HARGEYSO(P-TIMES)-Xaalada Doorashadii ka dhacday Deegaanada Somaliland ayaa sii cakirmeysa, iyadoona Guddigii loo xilsaaray doorashadaasi weli aysan ku dhawaaqin natiijada rasmiga ah ee doorashada iyo cidda hanatay Guusha.
Warar saacadihii ugu dambeeyay isa soo tarayay ayaa sheegay in Guddiga doorashada somaliland ay heshiis la gaareen xisbiga wadani kaasi oo ku aadan in guddigu ku dhawaaqaan doorashada, sidoo kalena musharaxa xisbiga wadani ku qanco waxa ka soo baxa doorashada, maadama wakiiladii u qaabilsanaa xisbiga la socoshada Doorashada iyo Tirinta codadka xalay saqdii dhexe ay isaga baxeen Markii labaad goobta Xarunta u ah Kumishinka doorashada Somaliland.
Balse, waxaa rajadii taas ay ka qabeen Shacabka ku nool deegaanada somaliland, ee dhagaha u taagay ku dhawaaqista Natiijada doorashada, meesha ka saaray musharaxa Xisbiga WADDANI C/rixmaan Cirro, oo shaaca ka qaaday in uu qaadacay Natiijo welba oo ka soo baxda doorashadii ka dhacday Somaliland.
Sidoo kale Musharax Cirro ayaa ka dhawaajiyay in dadkii u codeeyay doorashada ay ku jireen carruur aan qaan-gaarin, oo isugu jiray carruur 7 sano jir iyo kuwo dhowr iyo toban jir ah, waxaana uu intaa ku daray in xitaa dad geeriyooday ay codeeyeen.
Cirro oo la sii hadlaya warbaahinta ayaa qiray inay dhacday in waraaqihii doorashada ay banaanka u baxeen, sidoo kale sanaadiiqda dhamaan degmo doorashooyinka ka dhaceen ay ka bateen tiradii loogu tala galay oo uu ku tilmaamay in ku shubasho iyo musuq maasuq ay ka dhacday.
Arrintan ayaana dhabar-jab weyn ku noqoneysa Ku dhawaaqista natiijada laga sugayo Guddiga doorashooyinka somaliland.
Feysal cali waraabe oo ka mid ah Musharaxii saddexda ah ee ku loolameysay Doorashada somaliland, oo isagu u muuqda in uu ka baxay loolanka doorashadii ka dhacday somaliland, oo ka hadlay qaabka ay u dhacday doorashadan ayaa weeraray si gaar ah isagu xisbiga wadani oo uu sheegay in qaab beel-beel ah uu ka dhex bilaabay Doorashadii Somaliland.
Feysal Waraabe oo la moodo in uu u hadlay si nin kambeyn ku jira, ayaa sidii looga bartay weearkiisii afka ahaa ku qaaday Hogaamiyaha Xisbiga WADANI, isagoo si aan u muuqan mid siyaasad ku jirto carabka ugu duugay in uu qas wadaan Wadani.
Musharaxa Xisbiga haatan talada haya ee KULMIYE Muuse biixi, ayaa loo badinayaa in uu ku soo baxo doorashada Somaliland, maadama sida la sheegay uu haatan ku horeeyo Doorashada somaliland.
Muuse Biixi Cabdi, ayaa ah Jabhad ka qeyb qaatay Dagaalo Badan, waxaana la rumeysan yahay in uu yahay Nin ay sii adag tahay in uu hogaanka somaliland, uu si Hufan u qabto, isagoo lagu sheego nin qadiyad xun oo kala dilay beelaha wada degga somaliland.
Hadii ay dhabowdo in muuse biixi uu ku shubtay doorashadan, waxaa deegaanada somaliland ka bilaaban kara dagaal culus oo u dhaxeeya beelaha wada degga deegaanadaas, kuwaasi oo mar hore ay dhex mareen dagaalo culus, oo sida la aaminsan yahay uu qeyb lixaad leh ka qaatay Muuse Biix Cabdi.
Goor sii horeysaba somaliland waxaa ka dhacay Mudaharaadyo Rabshado wata oo galaaftay Nolasha 2 Ruux, halka tirro intaas ka badana ay ku dhaawacmeen, waxaana la filan karaa saacadaha soo socda in deegaanadaasi ka dhacaan rabshado kale maadama Taageerayaasha Xisbiga wadani oo ka Dhursugayay Hogaanka Xisbiga ay caawa Jawaabo ka heleen, taasi oo ah in Xisbigu qaadacay Doorashada.
Kormeerayaasha Caalamiga ah ayaa horey u sheegay in ay jiraan dhaliilo badan oo ku aadan qaabkii ay u dhacday Doorashadaasi, iyo sidii ay u maamuleen guddiga Doorashadu, waxaa kale oo ay tibaaxeen in Madaxtooyadda somaliland ay awood u adeegsatay doorashada iyo Xisbiyada ka soo hor-jeeda gaar ahaan xisbiga WADANI.
Somaliland ayaa haatan galeysa waji cusub, kaasi oo u muuqda in ay ku kala qeybsami doonaan dadkeeda, maadaama ay xisbiyadu u taaggan yihiin qaab beeleed, kuwaasi oo haatan isku haya Doorashadii qabsoontay 13 Bishan.